Ndiyifumana njani iAkhawunti yam ye-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndiyifumana njani iakhawunti yam ye-Instagram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 313
Ngamanye amaxesha kuye kwenzeka kuthi ukuba singabinakho ukufikelela kwiiakhawunti zethu zemidiya yoluntu, xa oku kusenzeka izinto eziliwaka zihamba ngeentloko zethu, ngaba bayigqobile iakhawunti yam? Ngaba ndichithe lonke ixesha namandla am? Ndenza ntoni ngoku? Ndizibuyisa njani zonke izinto endizithumelayo kwaye ndingazigcini?
I-Instagram ayisiyonto ikhethekileyo kulo mthetho wenethiwekhi apho singenakungena khona. Le meko inokuba njalo Uxinzelelo kakhulu Abanye abantu abazinikele iiyure zomzamo kwiiprofayili zabo de baphantse bagqibelela kwaye ngenxa yesizathu esithile le nkqubo ayivumeli ukuba bangene, ungakhathazeki, apha siza kukubonisa indlela yokusombulula le meko.
Izizathu kunye nezisombululo:
Ukuba ngasiphi na isizathu ucime iakhawunti yakho.
Ukuba oku kuyimeko yakho sineendaba ezimbi kuwe, xa ususa iakhawunti ngentando yakho kwaye uphoswa lixesha lokufumana kwakhona, malunga neentsuku ezingama-30, awusayi kuphinda uyenze, i-Instagram emva kweentsuku ezingama-30 zokucela ukucinywa ithathe iakhawunti yakho ekujikelezeni kwaye emva kweentsuku ezingama-90 isusa ngokupheleleyo ulwazi lwakho lomntu ngokupheleleyo kwinkqubo.
Ukuba iakhawunti iyekiwe ukusebenza kodwa ayicinywanga:
Kwimeko apho ucime iakhawunti, hayi ukuphelisa, Ukuba unokuphinda ufumane iakhawunti yakho ye-Instagram, kuba ngexesha lokwenza eli nyathelo uyeka ukubonakala kwabanye abasebenzisi besicelo, kufana nokuyeka ukuhamba indawo, kule meko, kuya kufuneka uphinde ungene iakhawunti yakho ye-Instagram enegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye ubuye nayo yonke ingcaciso yakho ekhoyo kwakhona kwisicelo.
Le meko intsonkothe ​​ngakumbi kunangaphambili, kuba i-Instagram inemigaqo-nkqubo yokusebenzisa kakhulu, ukuba ayithotyelwa, baya kuthwala isohlwayo, amanye amatyala ziintsuku nje ezimbalwa kuxhomekeke kulwaphulo-mthetho olwenziwe kwaye inkqubo iya kukwazisa nge-imeyile, ukuphula umthetho okwenziweyo kunye ixesha lesigwebo.
Ezinye zezizathu zokuba inkqubo ye-Instagram inokukugweba:
Wophule Ilungelo lokushicilela.
Shicilela umxholo wesondo ocacileyo.
Uyenzile Izithuba apho ukhubekise abanye abasebenzisi besicelo.
Le yenye yeemeko ezixinzelelekileyo anokujongana nazo nomsebenzisi othungelanayo rhoqo, kuba oku kuthetha ukuba umntu wesithathu ulawula iakhawunti yakho kwaye ke unokufikelela kulo lonke ulwazi lwakho, faka iphasiwedi yakho, ezinokutshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Uyifumana njani iakhawunti yakho:
Eyokuqala yile qinisekisa nokuba ungangena kwi-Instagram yakho okanye hayi.
Kwimeko apho ungenakukwazi ukungena kwi-Instagram yakho, kuya kufuneka ufumane kwaye usebenzise ukhetho lwe Msgstr "Cwangcisa kwakhona iphasiwedi".
Ukuba le yimeko yakho, inkqubo iya kukwazisa ngotshintsho lwedatha yokufikelela nge-imeyile.
Ingaba uyilibele iphasiwedi yakho:
Le yeyona nto ixhaphakileyo kumatyala, isisombululo silula, khangela nje kwaye usebenzise ukhetho lwe "Uyilibele iphasiwedi?" Kwaye ulandele imiyalelo oya kukunika yona kwinkqubo.
1 Izizathu kunye nezisombululo:
1.1 Ukuba ngasiphi na isizathu ucime iakhawunti yakho.
1.2 Ukuba iakhawunti iyekiwe ukusebenza kodwa ayicinywanga:
1.3 Uvaliwe nge-Instagram:
3 Uyifumana njani iakhawunti yakho:
4 Ingaba uyilibele iphasiwedi yakho:
Uzibeka njani iifilitha kwi-Instagram?
Ndingathanda ukubhalisa kwiTwitch Prime. Ndiyenza njani?